ब्याज नतिरी किस्तामा पाइन्छ सामसङ एस-२१ सिरिज फोन, टुटफुटमा बीमा पनि :: सुनिता सिटौला :: Setopati
'सामसङ एस–२१ सिरिज मनोरञ्जन र फोटोग्राफीका लागि धेरै उपयोगी छ'
नेपाली बजारमा विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोनले प्रवेश गरिरसकेका छन्। विश्व स्मार्टफोन बजारमा अग्रपंक्तिमा रहेको सामसङ नेपालमा पनि सबभन्दा रूचाइएको ब्रान्ड हो।
दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी सामसङका फ्ल्यागसिप फोन सामसङ ग्यालेक्सी ‘एस–२१’ सिरिज अन्तर्गत ‘एस–२१’, ‘एस–२१ प्लस’ र ‘एस–२१ अल्ट्रा’ नेपाली बजारमा आइसकेका छन्।
यो फोनबाट गरिएको अपेक्षा, यसका विशेषता, सामसङको नेपाली बजार हिस्सा, चुनौती, आगामी योजना लगायत सन्दर्भमा सामसङ नेपालका प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितसँग सेतोपाटीका सुनिता सिटौलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सामसङ एस–२१ सिरिज भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। फोन अहिले नै सार्वजनिक गर्ने योजना थियो कि कोरोनाले केही ढिला भयो?
कोरोनाले केही असर गरेको छैन। हामीले आफ्नो योजना अनुरूप नै ल्याएका हौं। विश्व बजारमा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपालमा पनि सार्वजनिक गरेका हौं।
यो कुन रेन्जको फोन हो? लक्षित ग्राहक को हुन्?
एस सिरिज सामसङका लागि नै महत्वपूर्ण सिरिज हो। यो फ्ल्यागसिप रेन्जको फोन हो। सामसङको पछिल्लो प्रविधिमा बनेका फोनलाई हामी उत्कृष्ट गुणस्तरयुक्त फोन भन्छौं। यसअन्तर्गत हामीले यस वर्ष ‘एस–२१’ सिरिज सार्वजनिक गरेका हौं।
यी फोनमा सामसङको पछिल्लो प्रविधि समावेश गरिएको छ। जो नयाँ प्रविधिका सामान चलाउन चाहन्छन्, ती वर्गलाई यो फोन उपयुक्त हुन्छ। यो सबै वर्गका ग्राहकलाई सुहाउँदो छ। यस सिरिजका छुट्टै फ्यान छन्। विशेषगरी उनीहरूलाई नै लक्षित गरिएको छ।
यी (सामसङ एस–२१, एस–२१ प्लस र एस–२१ अल्ट्रा) फोनका विशेषता के–के छन्?
यसको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पफर्मेन्स, क्यामरा र डिस्प्ले हो। फोनमा आधुनिक डिजाइन, अपग्रेडेड क्यामरा, भिडिओ र अहिलेसम्मकै शक्तिशालि प्रोसेसर राखिएको छ।
सबै स्मार्टफोनको आइकनिक डिजाइन छ। आकर्षक र आँखालाई लोभ्याउने खालको नयाँ रङहरूको समायोजन गरिएको छ। यस सिरिजमा सामसङको आफ्नै अत्याधुनिक प्रोसेसर एक्सिनोस २१०० प्रयोग गरिएको छ। फोनमा अत्याधुनिक चिपसेट तथा स्पिड बढाउने प्रविधि छ। फोनले सहजै फाइभ-जी कनेक्सन तथा अन-डिभाइस एआइलाई सपोर्ट गर्छ। जसबाट फोटो प्रोसेस, उच्च गुणस्तरको भिडिओ रेकर्ड, गेमिङ म्याराथन तथा भिडिओ सम्पादन सहजै गर्न सकिन्छ।
- ६.२ इञ्च एमोइड डिस्प्ले
- कर्निङ गोरिल्ला ग्लास
- ४ हजार एमएएच ब्याट्री, २५ वाट फास्ट चार्जिङ सुविधा
- एक्सिनोस २१०० चिपसेट
- ८ जिबी र्‍याम र १२८ जिबी स्टारेज
- १२ मेगापिक्सल वाइड, ६४ मेगापिक्सल टेलिफोटो र १२ मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामरा
- १० मेगापिक्सल सेल्फी क्यामरा
- मूल्यः १ लाख ९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ।
- ६.७ इञ्च एमोलेड डिस्प्ले
- ४८ सय एमएएच ब्याट्री, २५ वाट फास्ट चार्जिङ सुविधा
- मूल्यः १ लाख २९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ।
- ६.८ इञ्च सुपर एमोलेड डिस्प्ले
- ५ हजार एमएएच ब्याट्री, २५ वाट फास्ट चार्जिङ सुविधा
- १०८ मेगापिक्सल वाइड, १० मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो र १० मेगापिक्सल टेलिफोटो र १२ मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामरा
- ४० मेगापिक्सल सेल्फी क्यामरा
- मूल्यः १ लाख ५४ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ।
के कामका लागि यी फोन विशेष हुन्?
मोबाइलको प्रयोग यसकै लागि मात्र भन्ने छैन। धेरै काममा प्रयोग हुन सक्छ। फोनमा मनोरञ्जन गर्न चाहनेलाई यसमा भएको उच्च क्षमताको प्रासेसरले गेम खेल्न सक्छन्। डिस्प्लेको साइज पनि ठूलो भएकाले गेम खेल्न, फिल्म हेर्न तथा कार्यालयका काम गर्न सहज हुन्छ। यसमा १ सय २८ हर्जको रिफ्रेस रेट छ। जसले फोनलाई रिफ्रेस गराइरहने भएकाले ह्याङ हुनबाट बचाउँछ।
अर्को सेल्फी र फेसबुकको जमाना छ। यसबाट फोटोग्राफी गर्न सहज हुन्छ। जो फोटो खिचेर फेसबुकमा राखिहाल्ने वर्ग छ, उनीहरूका लागि पनि यो फोन एकदमै उपयुक्त हुन्छ। फोनको डिजाइन पनि फेसनएबल छ।
​​​​​​​यो फोन अरूभन्दा के विशेष र फरक छ?
सामसङले अरू फोनलाई हेरेर डिजाइन गर्दैन। विश्वको तथ्यांक हेर्दा अध्ययनमा पनि हामी अगाडि छौं। क्यामरा स्क्रिन र प्रोसेसर अरूभन्दा राम्रो छ। यो सफल उत्पादन हो। हामी आफ्नै इनोभेसनमा फोन निर्माण गर्ने भएकाले अन्य फोनको तुनलनामा निकै फरक छ।
हाम्रा नेपाली ग्राहकलाई यसको उपयोगिता कत्तिको हुन्छ?
फोन सबै व्यक्तिका लागि अभिन्न अंग भइसकेको छ। हरेक वर्गका लागि फोन आवश्यक छ। इमेल हेर्न, कहिले मनोरञ्जका लागि गेम खेल्न सकिन्छ। कार्यालयका काम गर्न सकिन्छ। सबै वर्गका लागि यो फोनमा सबै प्याकेज छ। कुनैमा प्रोसेसर पुग्दैन, कुनैमा ब्याट्री सकिहाल्छ, कुनैमा क्यामराको गुणस्तर राम्रो हुँदैन, तर यसमा सबै गुणस्तरीय छ। हरेक कोणबाट यो उत्कृष्ट उत्पादन हो। सबै खालका प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने फिचर्स यसमा समावेस छ।
फोन किस्ताबन्दीमा कसरी किन्न पाइन्छ? कति महँगो पर्छ?
ग्राहक सुरूमा स्टोरमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट कोटेसन लिएर बैंकमा जान पर्‍यो। बैंकले उनीहरू डिओ दिन्छन्। त्यो लिएर स्टोरमा गयो भने फोन पाइन्छ। किस्ताबन्दीमा फोन लिएबापत ग्राहकले कुनै ब्याज तिर्न नपर्ने हुनाले बजारमा पर्ने मूल्यमै पाउँछन्। बढी मूल्य लाग्दैन।
ग्राहकलाई यो किस्ताबन्दीमा दिन हामीले एनआइसी एसिया, एनआइबिएल, एनएमबी, सानिमा र ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सम्झौता गरेका छौं।
किस्तामा फोन किन्न ग्राहक आकर्षित देखिँदैनन् नि, किन होला?
हाम्रोमा फोन किस्तामा लिने भन्ने चलन नै छैन। आजभन्दा २० वर्ष अगाडि गाडी र मोटरसाइकल पनि किस्तामा लिने चलन थिएन। अहिले बाटोमा गुडेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी किस्ताका छन्। फोनमा पनि आकर्षित गर्न अहिले हामीले शून्य ब्याजदरमा दिएका छौं। कोही मान्छे यो फोन किन्न चाहन्छ र इएमआइका कारणले लिन सकेको छैन भने अब ब्याज तिर्नुपर्दैन। ग्राहकले बजारमा जुन मूल्यमा फोन पाउँछन्, त्यही मूल्यमा किस्तामा पाइन्छ।
नेपालमा आधिकारिक रूपमा भित्रने फोनमा सबभन्दा बढी बिक्ने फोन हाम्रो नै हो। एस–२१ सिरिजका फोन कहिले आउँछ भनेर कुर्ने ग्राहक छन्। तर कोरोनाले गर्दा मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। यसले केही समस्या पार्छ कि भन्ने लागेको थियो तर अहिले बुकिङ भएका परिमाण हेर्दा राम्रै बिक्री हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं।
सामसुङका ग्राहकले कम्पनीबाट पाउने सेवा सुविधा के हुन्?
प्रि–बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई हामीले उपहार दिने गरेका छौं। अहिले शून्य ब्याजदरमा किस्तामा फोन लिन सकिन्छ। त्यो बाहेक महँगो उपकरणमा एक वर्षभित्र टुटफुट भए बीमा व्यवस्था छ। त्योबाहेक हामीले सामानमा एक वर्षको वारेन्टी दिएका छौं। बिक्रीपछिको सेवामा हेर्ने हो भने हामीले वारेन्टीबाहेक सुलभ मूल्यमा सर्भिसिङ दिइरहेका छौं।
कोरोनाले मोबाइल बजारमा कस्तो असर पारेको छ?
सबै क्षेत्रमा असर पारेको बेला मोबाइल बजारमा पारेन भन्ने हुँदैन। सुरूआती लकडाउनमा हाम्रो पनि बजार बन्द भयो। पछि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा कार्यालयका काम पनि घरबाटै गर्ने भनेपछि बिक्री बढ्यो। कोरोनाले मोबाइल उद्योग उक्साएको नै छ। हामीले कोरोनाका बीचमा पनि फ्ल्यागसिप फोन सार्वजनिक गर्‍यौं।
नेपालमा सामसङ फोनको बजार हिस्सा कति छ?
नेपालमा कुन फोन बिक्री भयो भनेर अध्ययन गर्ने कुनै एजेन्सी छैन। तर हाम्रो आफ्नै अध्ययनले अन्यको तुलनामा हामी निकै अगाडि छौं। नेपालको मोबाइल बजारमा सामसङले ५० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ। यसले ग्राहकका लागि सबै रेञ्जका फोन उपलब्ध गराएको छ। सामसङ फोनको क्यामरा, ब्याट्री, डिभाइस गुणस्तरीय भएकाले यो सम्भव भएको हो।
सबभन्दा ठूलो कुरा इनोभेसन नै हो। उपभोक्ताले नयाँ कुरा खोज्छन्। हामी नयाँ नयाँ प्रविधियुक्त सामान ल्याइरहेका छौं। विश्व बजारमा सामसुङले जति पनि उपकरण सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ, ती सबै नेपाली बजारमा पनि ल्याउने योजना छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०७७, ०२:२८:०३
साओमीको रेड्मी के–५० सन् २०२२ मा सार्वजनिक हुने
नयाँ स्मार्टफोन साओमी–१२ मा हुनेछ ५० मेगापिक्सलको क्यामरा
रियलमीले नेपालमा ल्यायो नार्जो–५० सिरिज, कुन मोडलको कति?
यही महिनाभित्र सार्वजनिक हुने साओमी–१२ सिरिजका स्मार्टफोन
कस्ता फिचर छन् 'वानप्लस नोर्ड सिइ' फोनमा, कति पर्छ मूल्य? (भिडिओ रिभ्यु)